अझै भेटिएन पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरेको शव ! « Surya Khabar
अझै भेटिएन पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरेको शव !
काठमाडौं । डेढ महिनाअघि जिप दुर्घटनामा परी त्रिशूली नदीमा हराइरहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको शव पानी बाहिरको सतहमा खोज्न थालिएको छ ।
जीप दुर्घटनापछि बेपत्ता भएका उनको उद्धार तथा खोजीका लागि २५ जनाको गोताखोर परिचालन गरिए पनि नभेटिएपछि पानी बाहिरको सतहमा खोज्न थालिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बालकृष्ण पन्थीका अनुसार, पानीभित्रको सतहमा खोज्न सकिनेसम्मका भागमा खोजी कार्य गरिए पनि कुनै परिणाम हात नलागेपछि विशेषज्ञ टोलीको सुझावका आधारमा बाहिर सतहमा मात्रै खोज्न थालिएको छ ।
मुक्तिनाथ दर्शन गरेर फर्कदै गरेका घिमिरे परिवार सवार जीप ९ असोजमा त्रिशुलीमा दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटना भएकै दिन आमा, एक जना आफन्त र अंगरक्षकको शव फेला परेको थियो । दुर्घटनापछि परिचालित टोलीले केही दिनपछि एक जना भाइको शव फेला पारेको थियो । तर, पूर्वगृहमन्त्री घिमिरे र उनका अर्का भाइ भने अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन् । सोमबारको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।